Ụgbọ njem ụgbọ mmiri maka Zurich na Basel - Nanị na ntụsara ahụ
Gaa na n'enweghị ihe ọ bụla na nkwụsị - site na Ntanetị Ọrụ Ntanye gị
Ị na-eme atụmatụ ịga njem naanị maọbụ na ịzụ ahịa ma ị ga-achọ ịhụ na ị na-eme njem dị mma na ụgbọ elu ụgbọ elu nwere ike ịdabere tupu ị gaa?
Onye ọkwọ ụgbọala anyị ga-eburu gị otu n'ime ụlọ limuline anyị dị elu, bụ nke a na-edebe na German, site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ ámá nke ọdụ ụgbọ elu. N'ezie anyị ga-enyere gị aka na akpa. N'ezie, ọ bụrụ na ụgbọelu gị abịa n'oge na-adịghị anya, anyị agaghị ahapụ gị ma chere maka ịbịbịa gị.
Na-abịa na-ahụ jụụ na nke ọma na ebe ị na-aga
Ọtụtụ n'ime ndị njem anyị na-eji ọrụ nnyefe ọdụ ụgbọelu dị n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri Zurich na Euro Airport Basel, dịka njikọ ụgbọ okporo ígwè na-adịghị agafe n'agbata ọnụọgụ abụọ ahụ. Iji zọpụta njem ụgbọ ala na-adịghị ala ala ma ọ bụ njem taxi na-enweghị atụ, nhọrọ maka ụgbọelu ụgbọ elu anyị bụ mkpebi ziri ezi. Ebe anyị nọ na Basel dị na mpaghara triangle dị n'etiti France, Switzerland na Germany, anyị bụkwa onye gị na ya ga - achọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ na limousine anyị nanị na 70 kilomita site Freiburg ma ọ bụ gaa Stuttgart ma ọ bụ Munich.
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri Zurich na Basel - Tel: + 41 78 861 35 50
Mgbe mgbe ị na-aga agha
Ị na-agagharị dịka mmadụ n'otu nzukọ azụmahịa dị mkpa? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịtụkwasị obi na njem dị jụụ, oge ịda mbà na-adabere, ma, n'ezie, 100% nwere ezi uche n'oge oku azụmahịa gị. Dị ka ezinụlọ ma ọ bụ ìgwè, ị nwere ohere sara mbara buru ibu nke ị nwere, nke ị ga-enwe ike ịnweta njem nke ọma na ọdụ ụgbọ elu anyị site na Switzerland mara mma. Na mgbakwunye na nchekwa na oge, ndị ọkwọ ụgbọala anyị na-achọsi ike ime njem gị ka ọ dị mma dị ka o kwere mee.
Ọdụ ụgbọ elu ụgbọelu dị na ntanetị
Biko hapụ anyị ihe ọmụma na ụbọchị njem gị na anyị kọntaktịAnyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo o kwere omume iji kọwaa nkọwa. Ị nwere ike ịbịara anyị na ekwentị site na 41 78 861 35 50
Edere na: Basel ọdụ ụgbọ Shuttle limousine ọrụ Zuerich
taxi.flughafen Januar 23, 2017 Januar 23, 2017 Uncategorized Enweghị ihe ọ bụla
← Ụgbọ njem na Basel - njem nleta na Switzerland
360 ° Nyefee ọrụ maka ndị ọbịa na Basel →